स्वास्थ Archives - Page7of 18 - Dna Nepal
गण्डकी मेडिकल कलेजमा मनपरि शुल्क–विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित २१ माघ २०७५, सोमबार ०२:४४
प्रकाश ढकाल पोखरा, माघ २१ । तीनबर्षअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) मा एमविविएस पढ्न १ सय ८ विद्यार्थी भर्ना भए । जतिबेला काठमाण्डौं उपत्यकाभन्दा बाहिर एमविविएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । मन्त्रीपरिषद्..
कुन उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द हुन्छ ? (अनुसन्धानले यस्तो भन्छ) १३ माघ २०७५, आईतवार ०३:१९
एजेन्सी, माघ १३ । प्राय कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्ददायक भन्ने बिषयमा धेरै बहसहरु हुने गर्दन् । सामान्यतया कुरकुरे बैँश अर्थात् किशोरावस्थाको समयमा मान्छे सेक्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा..
होसियार ! सामान्य रुघाखोकीले लिन सक्छ ज्यान ३ माघ २०७५, बिहीबार ०२:०८
काठमाण्डौं, माघ ३ । खोकी लागिरहेको छ ? ३८ डीग्री सेल्सियसभन्दा बढी ज्वरोका साथै घाँटी पनि दुखेका व्यक्ति भेटिए अलि टाढै रहनुस् । चिकित्सकहरुको सुझाव छ –‘भरसक हात नमिलाउनुस् । नमस्कार गर्नुहोस् ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।..
राजधानीमा स्वाइनफ्लु भेटियो ३० पुष २०७५, सोमबार ०३:५८
काठमाण्डौं, पुस ३० । राजधानीमा स्वाइनफ्लु (एचवानएनवान) का बिरामी भेटिएका छन् । वीर अस्पतालतमा भर्ना भएका दुई बिरामीमा स्वाइनफ्लु संक्रमण देखिएको हो । संक्रमण बिरामीका करिब दुई सातादेखि उपचार भएरहेको छ । संक्रमित १५ र २६ वर्षका काठमाडौंबासी..
पोखराको चरक अस्पतालमा सञ्चालकबीच विवाद, ड्रिम प्रोजेक्ट नै अलपत्र २८ पुष २०७५, शनिबार ११:०१
पोखरा, पुस २८ । सञ्चालकहरुको आपसी विवादका कारण पोखराको पृथ्बीचोक स्थित चरक मेमोरियल अस्पतालको ड्रिम प्रोजेक्ट अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि सेयरधनीहरुको आपसी विवादले अस्पतालको नयाँ बन्दै गरेको भवन अलपत्र परेको हो । आगामी बैंशाखदेखि निर्माण..
स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकीमा काँग्रेस निकट पेशागत समूहले बाजी मार्यो २२ पुष २०७५, आईतवार ०१:२१
पोखरा, पुस २२ । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस निकट पेशागत समूह बिजयी भएको छ । एकजना खुला सदस्य बाहेक १० जना पेशागत समूहबाट बिजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा पेशागत समूहका सन्तोष पौडेल बिजयी भए । ९५ मत सहित पौडेल बिजयी हुँदा उनको..
पोखराको चरक अस्पतालका डाक्टरहरु बीचमै हानाहान १९ पुष २०७५, बिहीबार १२:३६
पोखरा, पुस १९ । पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै रहेको चरक मेमोरियल हस्पिटल प्रालिमा कार्यरत डा.ऋषिराम ढकाललाई सञ्चालकले कुटेका छन् । अस्पतालका सेयर सदस्य रामचन्द्र रेग्मीले बुधबार जनरल सर्जन डा. ढकाललाई कुटेका हुन् । डाक्टर कुटेको आरोपमा प्रहरीले..
सिक्लेसमा मुटु र मिर्गौलाको उपचार ८ पुष २०७५, आईतवार ०४:१७
पोखरा, पुस ८ । कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा मुटु तथा मृगौला रोगको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको छ । स्व. गगन सिं गुरुङ स्मृती प्रतिष्ठानको आयोजना र सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको प्राविधिक सहयोगमा शिविर गरिएको हो ।..
पोखरामा रेडक्रसकै एम्वुलेन्स दुरुपयोग, विरामी छोडेर दिनभरी पिकनिकको रमझममा ७ पुष २०७५, शनिबार १४:२१
पोखरा, पुस ७ । एम्बुलेन्सको काम के हो ? विरामी ओसारपोसार गर्ने । तर नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ ले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स शनिवार दिनभरी दोविल्ला स्थित पिकनिक स्पटमा थियो । स्थानीय यूवाहरुको देउसीभैलोबाट उठेको..
गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख घुससहित पक्राउ, भ्रष्टाचार मुद्धा दायर ३ पुष २०७५, मंगलवार ११:०३
पोखरा, पुस ३ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका प्रमुख डा. तारानाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । डा. पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले मंगलबार विशेष..